आजबाट मलमास सुरु, मलमासमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाजआजबाट मलमास सुरु, मलमासमा के गर्न हुन्छ, के हुँदैन ?
काठमाडौं । अधिकमास अर्थात् पुरुषोत्तम मास शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । असोज २ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म मलमास चल्नेछ । एक चान्द्रमासभरि कुनै पनि शुभकर्म गर्न नमिल्नेगरि सुरु भएको पुरुषोत्तम मासकै कारण यस वर्षको दशैं–तिहार पछि सरेको छ भने सोह्रश्राद्ध केही अघि सरेको छ ।
पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालका अध्यक्ष प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईका अनुसार यो महिना अशुद्ध भएको र गणनामा नै नहुने भएकोले यो एक महिना कुनै पनि मुहूर्त जुराएर गर्ने काम गर्न शास्त्रले निषेध गरेको छ ।
यो महिनामा केही कामको लागि निषेध गरिएको छ भने केही काममा बाधा नहुने कुरा विभिन्न धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ । अधिकमास लाग्नुअघि नगएका तीर्थमा यस महिनाभरि जान नहुने प्रा.डा. भट्टराईको कथन छ ।
यो महिनामा भगवान विष्णुलाई मनपर्ने माल्पुवा जस्ता परिकारसहित विष्णुको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ । प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईका अनुसार मलमासको समयमा गर्न हुने र गर्न नहुने कामहरू निम्नानुसार छन् ।